China 5263 3-Stage N'okpuru Sink Tankless Ezinaụlọ Reverse Osmosis System factory na-emepụta | Teknụzụ nzacha
Nnyocha ụlọ niile
Nhicha ụlọ na kichin
Ntughari Osmosis nchigharị
Sistemu nzacha kichin
Ihe nzacha nnọchi
5263 3-ọkwa n'okpuru Sink Tankless House Reverse Osmosis System
Tankless China na -atụgharị usoro nzacha osmosis na -eme ka mmiri dị mma na -adịgide adịgide.
Na -ewepụ ọtụtụ mmetọ gụnyere TDS, ọla dị arọ, nje bacteria na mmiri mgbata gị.
Otu katrijị nzacha enwere ike ịchekwa oge nhicha gị ma zere mmetọ nke abụọ.
2 na 1 kọmpụta nzacha kọmpat, chekwaa oghere gị n'okpuru mmiri ma dị mfe iji dochie ihe.
Ngosipụta ndụ nzacha na nrụgharị, lelee nke ọma mgbe ị ga -agbanwe nzacha gị.
Zitere anyị email Budata akwụkwọ ntuziaka
Ihe nhicha mmiri RO bara uru maka ụlọ
Ihe nzacha gradient 3 na-ewepụta mmiri dị ụtọ, dị ọcha ozugbo na ọkpọkọ kichin gị, dabara adaba na gburugburu ebe obibi karịa ọtụtụ mmiri karama. Ị nwere ike ịnụ ụtọ mmiri dị ọcha, mkpụrụ osisi kristal doro anya, kọfị ọhụrụ na nri na -atọ ụtọ karịa.
Ahaziri Real oge ngosi
Onye na-asacha mmiri RO nwere smart nwere ngosipụta na-enyere gị aka inyocha ogo mmiri gị n'ụzọ dabara adaba, dị ka TDS nke mmiri nzacha, ihe na-egosi mgbanwe mgbanwe, wdg, njirimara mara mma nke ga-enyere aka ịkwalite ahụmịhe onye ọrụ gị.
Ncha na-enweghị tank
Sistemụ osmosis kọmpat a na-abịa na ahụ dị gịrịgịrị na-eche na ntụgharị ya ga-adabara n'ụdị ụlọ ọ bụla. N'adịghị ka ọtụtụ nkeji RO, ọ nwere atụmatụ enweghị tankị ma nwee ike imere gị oghere kichin kacha mma.
Ntugharị gbagọrọ agbagọ
Site na ịgbanyụ dị mfe, ngbanwe nzacha nke nzacha mmiri RO a nwere ike ịme ngwa ngwa na -enweghị iju mmiri ma ọ bụ mgbapụta. Ịkwesighi gbanyụọ mmiri na -abata ma ọ bụ welie ngwaọrụ ahụ dịka nke ọdịnala.
Easy echichi na nnọchi
Ihe nzacha mmiri RO a na -abịa na nhichapụ ihe nzacha ụdị, dị mfe maka ịwụnye na dochie ihe nzacha dịka ịchọrọ. Ihe nrịba ama teknụzụ nkwụsị mmiri nwere ihu abụọ nke emebere maka katrij nyo bụ nnukwu enyemaka iji gbochie mmiri na-esi na katrij apụta, yabụ na ị gaghị agbanyụ mmiri na-abata mgbe ị na-atụgharị ya.
Akwa arụmọrụ na 3 nkebi
Agba nke mbụ: CF gụnyere PP na CB. PP sediment filter (10-15μm) nwere ike weghara colloid, sedimenti, nchara, nnukwu irighiri ihe na adịghị ọcha; Ihe mgbochi carbon (5-10μm) nwere ike wepu klorine fọdụrụ (≥85%) na COD (≥25%);
Agba nke abụọ: akpụkpọ ahụ RO (0.0001μm) nwere ike igbochi ion siri ike etisasịworo dị ka nnukwu ọla, yana ụmụ irighiri ihe dị ka nje coliform. Ọnụ nsị bụ> 95%. Anyị nwere 75G, 400G, 500G na 600G ịhọrọ site na. Abụọ Toray na Dow dị.
Agba nke atọ: Bubata ngọngọ carbon (10-15μm) nwere ike wepu chlorine fọdụrụ, carbon tetrachloride, methane nwere ọnụego mwepụ ruo 85% na usoro ahụ niile, ma nwee ike wepu agba, isi na ụtọ dị na mmiri. Carbon antibacterial bụ nhọrọ iji gbochie uto nke nje.
Ọnụego ya 0.2L/min (75G)
Akụkụ RO3A 445 × 130 × 420mm
Ọnọdụ okpomọkụ na -arụ ọrụ 5-38 ℃
Nrụgide ọrụ 0.1-0.4Mpa
Njikọ Inlet: 3/8 ″ PE tube, mmiri dị ọcha na mmiri mkpofu: 1/4 ″ PE tube
Media nyo CF (PP+ihe mgbochi CB)+RO+CB (ọgwụ nje nwere)
Atụmatụ - E (ụdị akụ na ụba) Ngosipụta ihe ngosi ndụ na nrụpụta; nchedo oge ọrụ; mgbata mmiri nkịtị
Njirimara-M (ụdị ngwụcha) Ngosipụta ihe ngosi ndụ na nrụpụta; nchedo oge ọrụ; foset mara mma; Ngosipụta TDS; nchedo nchapu mmiri; smart ịgba mmiri; ọnọdụ ezumike
Nke gara aga: 5262 3-Agba n'okpuru Sink System Osmosis na-amị amị
Osote: 5264 3-ọkwa n'okpuru Sink House Reverse Osmosis System
Sistemụ Nchọgharị Mmiri Osmosis kacha mma
Sistemu Osmosis kọmpat
Sistemụ osmosis nke ụlọ
Sistemụ Osmosis zuru ụlọ zuru oke
5214 3-Stage N'okpuru Sink House Ultrafiltrati ...
5267 N'okpuru Sink House Compact Reverse Osmos ...
5264 3-Ọkwa n'okpuru imebi ụlọ Osmos ...
5262 3-Nkeji n'okpuru Osmosi Reverse n'ime ime ụlọ.
5210/5211 3-Stage N'okpuru Sink House Ultrafil ...
5268 Ọkwa 2 N'okpuru Sink Ezinaụlọ Reverse Osmos ...
Kwuo mmiri na karama na microplastics
Single Myọcha mmiri nke na -ebelata iche iche ...
Copyright - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa apụta, Map saịtị
Ụlọ na -asachacha mmiri n'ụlọ, Njikere nzacha, Mmiri na -asacha mmiri Maka mmiri siri ike, Kpatụ sistemụ nzacha mmiri, Sistemụ osmosis kacha mma, Nnọchi Ihe Njikere Njikere Mmiri,